गाडीमुनि केही त छैन ?
काठमाडौं २६ मंसिर । रोकिएको सवारी साधन फुत्तै कुदाउने गर्नुभएको छ ? अहँ, त्यसो नगर्नुहोस । त्यसको मुनि वा आडमा मान्छे, पशु–पन्छी जे पनि हुन
काठमाडौं २६ मंसिर । करिब एक महिनाअघिको कुरा हो। अछामका २१ बर्से पुरन तिमल्सिना साइबर अपराधमा समातिए। भारतमा बस्ने उनले आफ्नै गाउँकी एक युवतीको ‘फेक’ फेसबुक अकाउन्ट खोले। युवती र
काठमाडौं २६ मंसिर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) को धावनमार्ग रिह्याबिलिटेसन (जीर्णोद्धार) को दोस्रो चरण तोकिएको समयभन्दा करिब ६ महिनाअघि सकिने भएको छ । जीर्णोद्धारको काम सक्ने म्याद आगामी मेसम्म
काठमाडौं २६ मंसिर । आजदेखि बर्षा र हिमपात हुन भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबार रातिदेखि तीन दिनसम्म मुलुकका अधिकांश ठाउँमा मौसम बदली, केही भागमा हल्का वर्षा
काठमाडौं २५ मंसिर । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घट्ने क्रम जारी छ। मंगलबार छापावाल सुन तोलामा २ सयले घटेर सुन तोलाको ७० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको
फेरि डायलाइसिस कस्तो छ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडौं २५ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार राति हेमो डायलाइसिस गराउन मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर गएका छन् । प्रधानमन्त्रीगत बिहीबारमात्र १० दिनको अस्पताल बसाईपछि सेन्टरबाट डिस्चार्ज
काठमाडौं २३ मंसिर । काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र मिचेर आफैं मुद्दा फैसला गर्ने गरेका छन्। संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रका मुद्दा हेर्न न्यायिक समितिलाई
भारतसँग वार्ता गर्न माधव नेपाल विषेश दुत किन हुन सकेनन ?
काठमाडौं २३ मंसिर । अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकबारे चर्चा हुन थालेको महिना दिन वितिसक्दा पनि नेपालले ठोस निकास निकाल्न सकेको छैन। सरकारले यो विषयमा भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक
काठमाडौं २३ मंसिर । संसद सचिवालयले संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयले संसदको पाँचौँ अधिवेशन बोलाउने तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । अब एक दुईदिन
काठमाडौं २३ मंसिर । रुघाखोकीको औषधि बनाउने रासायनिक पदार्थ स्युडोइफेड्रिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै तस्करी हुने गरेको भेटिएको छ । गिरोहले स्युडोइफेड्रिनको धूलो विदेश लगेर आइसड्रग (सेन्थेटिक ड्रग) बनाउन प्रयोग
कांग्रेसमा विभाग गठनका विषयमा फेरि विवाद, यस्तो छ देउवा र पौडेलको रणनीति
काठमाडौं २२ मंसिर । नेपाली कांग्रेसमा विभागन गठनका विषयमा फेरि विवाद सुरु भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच गठन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा विवाद
हत्यामा संलग्न १८ वर्षीय युवक पक्राउ
काठमाडौं, १५ माघ । हत्यामा संलग्न फरार अभियुक्त १८ वर्षीय युवक पक्राउ परेका छन् ।